Hydration isinyi, kupholile ubhaka, ubhaka okungangenwa - Sibo
ukuphola okuthambileyo, ibhegi engenamanzi, i-hydration bladder, ibhotile yezemidlalo kunye nokuloba
Ukugcina amanzi emanzini
wazi ngakumbi ngeSIBO
Sibo Bags & Suitcases Fitings Co., Ltd. Jiniang, inkampani ezimeleyo ngokupheleleyo SBS Group, eyasekwa ngo-2002. Injongo yethu yoqobo yayikukuba liziko lokuthenga elinye labathengi be-SBS. Ekuqaleni kokusekwa, ikakhulu sinikezela ngamabhakethi kwiingxowa, iintambo zezihlangu, iimpahla, kunye neemveliso zoluhlu. Ngokuqina kwabathengi kunye nemarike, ngo-2003 saqala ukuphuhlisa kunye nokuvelisa imidlalo yangaphandle kunye neemveliso zokuzonwabisa sisodwa. Njengeebhotile zamanzi kunye nochungechunge lwe-hydration bladders. besinendawo yethu yokusebenzela engenawo uthuli yokuvelisa ngokuzenzekelayo ibhotile yamanzi kunye ne-hydration bladder ukubonelela abathengi ngokukhetha ngakumbi kunye neenkonzo ezahlukeneyo. Iimveliso ze-SBS Sibo zithandwa kakhulu kubathengi behlabathi kwaye ziseka ubuhlakani bexesha elide kunye neempawu ezingaphezulu kwama-30well ezaziwayo kwigama.
I-SIBO eyona mveliso iphambili yokuvelisa iimveliso zangaphandle
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza
Iimveliso ze-SIBO zikukhapha kuyo yonke imidlalo yangaphandle
I-SIBO entsha kunye nokukhathalela malunga neqela lokhuselo lokusingqongileyo
Imisebenzi yeSIBO yoPhuculo loMgangatho waBasebenzi
Nge-27 ka-Disemba ka-2020, emva kwentlanganiso yovavanyo yonyaka, i-SIBO yaququzelela umsebenzi wophuhliso olusemgangathweni wabasebenzi abagqwesileyo ..
082021 / Julayi
Uqeqesho kwi-Intanethi lwezakhono zohlangulo oluNgxamisekileyo
NgoJuni 25, 2021, Inkampani ye-SIBO yaqhuba uqeqesho lwezakhono zokuhlangula kwi-Intanethi kubo bonke abasebenzi. Kolu qeqesho, abasebenzi be-SIBO bafunde izakhono ezisisiseko zokuhlangula ngokukhawuleza kwithiyori ngokubukela iividiyo ngokudibeneyo. Kwelinye icala, yi ...
022021 / Julayi
Indlela echanekileyo yokusela Amanzi ngokuKhwela ngaphandle
Umthamo wamanzi wamadoda aqhelekileyo umalunga ne-60%, umxholo wamanzi amabhinqa yi-50%, kwaye umxholo wamanzi eembaleki ezikumgangatho ophakamileyo usondele kwi-70% (kuba umxholo wamanzi esihlunu uphezulu njenge-75% kunye nomxholo wamanzi Amanqatha ayi-10% kuphela). Amanzi yeyona nto ibalulekileyo ...
Iibhegi zeSibo kunye neeSuitcases Fitings Co, Ltd. Jiniang